I-china i-COVID-19 Antibody / Antigen Detection Kit abakhiqizi nabaphakeli | Yinye
Lo mkhiqizo ulungele ukutholwa kwekhwalithi ye-COVID-19. Inikeza usizo ekutholeni ukutheleleka nge-coronavirus yenoveli.
Lo mkhiqizo ukufanele ukutholwa kwekhwalithi ye-COVID-19 / Umkhuhlane A / Umkhuhlane B kumasampula e-Sputum / Stool. Inikeza usizo ekutholeni ukutheleleka ngamagciwane angenhla.
Ama-coronaviruses amanoveli angawohlobo lwe- β. I-COVID-19 iyisifo esithathelwanayo sokuphefumula esibi. Abantu bavame ukuthambekela. Njengamanje, iziguli ezitheleleke nge-coronavirus yenoveli zingumthombo oyinhloko wokutheleleka; abantu abangenwe yigciwane bangaba futhi umthombo othathelanayo. Ngokuya ngophenyo lwamanje lwezifo, isikhathi sokufukamela izinsuku ezi-1 kuye kwezingu-14, ikakhulukazi izinsuku ezi-3 kuye kwezi-7. Ukubonakaliswa okuyinhloko kufaka phakathi umkhuhlane, ukukhathala nokukhwehlela okomile. Ukucinana kwamakhala, ikhala eligobayo, umphimbo obuhlungu, i-myalgia nohudo kutholakala ezimweni ezimbalwa.
Ikhithi yokuhlola iqukethe imichilo emibili yokuhlola:
Kwenye yazo, iphedi ye-burgundy enombala we-conjugate oqukethe i-Novel coronavirus recombinant envelope antigens ehlanganiswe negolide le-Colloid (i-Novel coronavirus conjugates), i-2) umugqa we-membrane we-nitrocellulose oqukethe imigqa emibili yokuhlola (imigqa ye-IgG ne-IgM) nolayini wokulawula (umugqa we-C1) .
Ulayini we-IgM ufakwe kuqala nge-anti-human IgM antibody yegundane, umugqa we-IgG uboshwe nge-Mouse anti-Human IgG antibody. Lapho ivolumu eyanele yokuhlolwa isatshalaliswa emthonjeni wesampula wedivayisi yokuhlola, isampuli lifuduka ngesenzo se-capillary kuyo yonke idivayisi. I-anti-Novel coronavirus ye-IgM, uma ikhona ku-specimen, izobopha kuma-conjugates we-Novel coronavirus.
I-immunocomplex bese ithathwa yi-reagent pre-camera ebhentshini le-IgM, yakha umugqa we-burgundy onemibala ye-IgM, ekhombisa umphumela wokuhlolwa omuhle we-Novel coronavirus IgM. I-anti-Novel coronavirus ye-IgG uma ikhona ku-specimen izobophela kuma-conjugates we-Novel coronavirus. I-immunocomplex bese ithathwa yi-reagent camera emgqeni we-IgG, yakha umugqa we-burgundy onemibala ye-IgG, ekhombisa umphumela wokuhlolwa omuhle we-Novel coronavirus IgG. Ukungabikho kwanoma yimiphi imigqa engu-T (IgG ne-IgM) kusikisela umphumela omubi. Ukuze isebenze njengokulawulwa kwenqubo, ulayini onemibala uzohlala uvela esifundeni sentambo esibonisa ukuthi ivolumu efanelekile yesampuli ingeziwe futhi ukuxhunwa kwe-membrane kwenzeke.
Komunye umucu, umucu wokuhlola unezingxenye ezilandelayo: okungukuthi isampula pad, i-reagent pad, ulwelwesi lokuphendula, kanye nephedi yokufunxa. Iphedi reagent iqukethe i-colloidal-gold ehlanganiswe nama-antibody monoclonal ngokumelene neprotein ye-nucleocapsid ye-SARS-CoV-2; ulwelwesi lokuphendula luqukethe ama-antibodies wesibili wamaprotheni we-nucleocapsid we-SARS-CoV-2. Umucu wonke ulungiswe ngaphakathi kwensimbi yepulasitiki. Lapho isampula lengezwa kusampula kahle, ama-conjugates omisiwe kuphedi ye-reagent ayachithwa futhi athuthe kanye nesampula. Uma i-antigen yakwa-SARS-CoV-2 iveza kusampula, isakhiwo esakhiwe phakathi kwe-anti-SARS-2 conjugate negciwane sizothathwa ngama-anti-SARS-2 monoclonal antibodies ahlanganiswe esifundeni somugqa wokuhlola (T). Ukungabikho komugqa we-T kusikisela umphumela omubi. Ukusebenza njengokulawulwa kwenqubo ulayini obomvu uzohlala uvela esifundeni somugqa wokulawula (i-C2) okukhombisa ukuthi ivolumu elifanele lesampula selifakiwe futhi ukuxhunywa kwe-membrane kwenzeke.
Inaliti Yokuqoqa Igazi
Langaphambilini I-COVID-19 / I-Influenza A / I-Influenza B Yokuthola Ikhithi
Olandelayo: I-COVID-19 IgM / IgG ye-Antibody Detection Kit (iColloidal Gold)
I-COVID-19 Antigen Detection Kit ye-Nasal Swab / ...
I-COVID-19 Neutralizing Antibody Detection Kit